बेलायतको स्थानीय चुनावमा नेपाली मूलका ४ उम्मेदवार विजयी - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > NRNA > बेलायतको स्थानीय चुनावमा नेपाली मूलका ४ उम्मेदवार विजयी
बेलायतको स्थानीय चुनावमा नेपाली मूलका ४ उम्मेदवार विजयी
May 3, 2019 May 3, 2019 GRISHI469
लन्डन। बेलायतमा बिहीबार सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली मूलका ४ उम्मेदवार विजयी भएका छन्। स्थानीय अल्डरसट टाउन काउन्सिलमा प्रवेश केसी, मेडस्टोन काउन्सिलमा दिनेश खड्का, हेमल हेम्पस्टिडमा गोवद्र्धन (सागर) सिलवाल र कोलबर्न टाउनमा डा. जगन्नाथ शर्मा काउन्सिलर निर्वाचित भएका हुन्। बेलायतका विभिन्न क्षेत्रबाट काउन्सिलरको दौडमा रहेका नेपाली समुदायका अन्य उम्मेदवार भने पराजित भए।
बेलायतमा धेरै नेपाली बस्दै आएको अल्डरसटमा केसी पहिलोपटक नेपाली समुदायबाट निर्वाचित भएका हुन्। कन्जरभेटिभ पार्टीका उम्मेदवार केसी ३ सय २८ मत प्राप्त गर्दै विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी लेबर पार्टीका उम्मेदवारले २ सय ८६ मत प्राप्त गरेका छन्। यसअघि लेबरले जित्दै आएको सो क्षेत्रको नतिजा उल्ट्याएर केसीले जितेका हुन्।
लिबेरल डेमोक्र्याट पार्टीका उम्मेदवार खड्काले ८ सय ५२ मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकट प्रतिद्वन्द्वी लेबर पार्टीका उम्मेदवारले सय ४६ मत मात्रै पाएका छन्। खड्का निर्वाचित क्षेत्र विगत लामो समयदेखि उनकै दल लिबेरल डेमोक्र्याटको पकड क्षेत्र हो।
सिलवाल दोस्रो कार्यकालका लागि काउन्सिलरमा निर्वाचित बनेका छन्। ७ सय २४ मत प्राप्त गरेका उनले निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले भन्दा ४ सय बढी मत ल्याएका छन्। डा. जगन्नाथ शर्मा तेस्रो कार्यकालका लागि काउन्सिर निर्वाचित भएका हुन्। कन्जरभेटिभ पार्टीका उम्मेदवार शर्मा सो क्षेत्रमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्।
इङ्ल्यान्डका २ सय ४८ काउन्सिल, ६ मेयर र नर्दन आयरल्यान्डका ११ काउन्सिलसहितका स्थानीय तहमा ८ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाचन भएको थियो।
काठमाण्डाैका सडक सफा राख्न नाकामा सरकारले नै गाडी धोइदिने !
February 13, 2020 February 16, 2020 Raju Thapa
January 24, 2020 January 24, 2020 GRISHI
January 30, 2020 February 1, 2020 GRISHI